Adeegyada Cilmi-baarista - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Adeegyada Cilmi baarista
Qeybta Adeegyada Cilmi-baarista waxaa ku jira dhowr barnaamijyo cilmi-baaris oo degmadu leedahay iyo sidoo kale gacan adeegyo qandaraas leh. Qeybta dambe waxay la shaqeysaa ad hoc, kooxo iskutallaab ah oo xirfad u leh wax ka qabashada cilmi-baarista aan caadiga ahayn iyo caqabadaha iyo meeleynta horumarinta barnaamijka. Xubnaha kooxdayada yihiin kuwa xallinta dhibaatooyinka xeel-dheereyaasha leh ee leh ballaadhinta siyaasadeed ee ballaadhan iyo noocyo xirfadeed oo shaqeynaya.
Raac Lacagta Meesha Bannaan ee Isticmaalayaasha Curaarta
Tani waa halka aad ka heli karto macluumaadka ku saabsan deynta dadweynaha ee ku dhex taal Gobolka Washington. Waxaan ururinaa oo aan falanqeynaa xogta ku saabsan soo saarista deynta waxaana soo saarnaa warbixin sanadle ah oo ku saabsan deynta deynta guud ee waajibaadka maxalliga ah.
Barnaamijka Ogeysiiska Maaliyadeed ee Dawlada Hoose
Siyaasad-dejiyeyaashu waxay go'aan ka gaaraan markay helaan dhammaan xaqiiqooyinka. Taasi waa sababta Barnaamijka Lacagta Maaliyadeed ee Dawladda Hoose loo sameeyay 38 sano ka hor.
Waxaan siinaa Sharci dejinta qiyaasaha ujeedada ee saameynta maaliyadeed ee sharciga la soo jeediyay ee ku wajahan gobolada, magaalooyinka, iyo degmooyinka ujeedooyinka gaarka ah leh. Kooxdayada khibrada leh ee falanqeeyayaasha ayaa baaraya ku dhowaad sharci kasta ama hindise wax ka badali kara dakhliga ama kharashyada dawladda hoose.
Meesha Degmooyinka Xarumaha Dadweynaha ay u aadayaan Dib-u-eegis Lagu Sameynayo Suurtagalnimada Dhaqaale
Waxaan maareyneynaa nidaamka lagu sameynayo dib u eegista suurtagalka ah ee maaliyadeed ee madaxbanaan ee mashaariicda la soo jeediyay ee degmooyinka xarumaha bulshada. Waaxda Ganacsiga doorkeedu ma ahan inay oggolaato ama diido qorshaha degmo ee xarumaha dadweynaha.
Fiiri Bond Cap
Iskaashigaaga Dadweynaha-Gaarka ah wuxuu u qalmi karaa Bond-ka Canshuur dhaafka ah
Waxaan oggolaaneynaa bixinta curaarta howlaha canshuuraha ee canshuuraha laga dhaafay. Kuwani waxay ikhtiyaar u noqon karaan maalgelinta qaar ka mid ah iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka ah. Shaqaalaheenu waxay dib u eegaan mashaariicda la soo jeediyey si loo hubiyo u hogaansanaanta sharciga federaalka iyo gobolka.
Taageerada Cilmi-baarista iyo Horumarinta Barnaamijka ee Aad U Baahan Tahay - Markaad U Baahan Tahay
Waxaan siinaa Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington iyo sidoo kale hay'adaha kale ee gobolka iyo kuwa maxalliga ah il-ku-joogga waqtiga laga heli karo cilmi-baarista siyaasadda, qorista deeqda, iyo khibradda qiimeynta barnaamijka.
Tobankii sano ee la soo dhaafey waxaan dhameystirnay in ka badan 100 mashruuc, kuwaas oo u dhexeeyey leylisyo dhowr ah oo si deg deg ah loo carqaladeynayo iyo maaraynta dhammaan dhinacyada daraasadaha sharci dejinta ee lixda ah.
Haddii uu jiro qof garanaya jawaabta, waa MRSC
Xarunta Cilmi-baarista iyo Adeegyada ee Dawladda Hoose waxay bixisaa macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan mowduucyo fara badan oo muhiim u ah dawladaha hoose. Wasaaradda Ganacsiga waxay siisaa maalgelinta gobolka MRSC hoosta RCW 43.110. Adeegyada Cilmi baarista ayaa maamula qandaraaska.